Home » သတင်း » Rising Sun ကရုပ်ပုံများပညာရေး: Joannah Anderson ကအင်တာဗျူး
Rising Sun ကရုပ်ပုံများပညာရေး: Joannah Anderson ကအင်တာဗျူး
တဲ့ professional ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။
Adelaide, တောင်သြစတြေးလျ- Rising Sun ကရုပ်ပုံများပညာရေးအများအပြားငယ်ရွယ်အနုပညာရှင်တွေစက်မှုလုပ်ငန်းမှစာသင်ခန်းကနေခုန်အောင်ဖို့အသုံးပြုကြသောနင်းသောကျောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Joannah Anderson ကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အောင်မြင်စွာယခုနှစ်အစောပိုင်းကအဆိုပါ RSP / UniSA 12-ရက်သတ္တပတ်ဘွဲ့လွန်လက်မှတ် Dynamic အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အစီအစဉ်နှင့်အလင်းပြီးစီးခဲ့ရှိခြင်း, Joannah ရုံ Adelaide အတွက် Technicolor ရဲ့အသစ်ဖြန့်ချိစက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စတူဒီယိုမှာအငယ်တန်း 3D Lighting အဆိုတော်အဖြစ်သူမ၏ပထမဦးဆုံးအလုပ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရောင်းရန်, ဗစ်တိုးရီးယားဇာတိယခုသူမဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းရုပ်ရှင်ရုံများအတွက်လတ်ရုပ်ရှင်စီမံကိန်းတွေအပေါ်လက်တွေ့ကျသောအသုံးပြုမှုမှ 3D အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနည်းစနစ်မှာလေ့လာခဲ့တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုချပြီးလိမ့်မည်။
Joannah မကြာသေးမီက RSP မှာသူမ၏အတွေ့အကြုံ, သူမ၏အလုပ်သစ်နှင့်သူမ၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. RSP နှင့်အတူနှုတ်ဆက်လေ၏။
Joannah Anderson က: Adelaide အတွက် AIE (Interactive Entertainment ၏အကယ်ဒမီ) မှာ။ ငါ 18 ကြီးနှင့်ကာတွန်းသော်လည်းငါ့ဇာတိမြို့, ရောင်းရန်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုဘာမှမပူဇော်ခဲ့ပေ။ ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်း, ငါ့မိဘများ Adelaide နှင့် AIE တစ်ဦးပြောင်းရွှေ့စီစဉ်ခဲ့ကြသည်ရုံအချိန်တွင်ဖွင့်လှစ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ဂျေ: 3D ကာတွန်းနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု။ ငါဂိမ်းအစီအစဉ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာရိုက်ကူးလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်နှင့်မီဒီယာတစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာရရှိခဲ့သည်။
RSP: အဘယ်အရာကို RSP ရန်သင့်အားဦးဆောင်?
ဂျေ: AIE တစ်ပွင့်လင်းအိမ်သူအိမ်သားခဲ့နှင့်စပီကာထဲကတစ်ခု Sun ကရုပ်ပုံများ Rising ကနေဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဖြောင့်ကျောင်းထွက်တစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မခံခဲ့ရပါလျှင်, ငါသည် RSP မှာအချို့သောပိုပြီးအတွေ့အကြုံရင့်စဉ်းစားမိတယ်။
ဂျေ: ဒါဟာတကယ်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တစ်ဦးစတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပညာရှင်များအနေဖြင့်လေ့လာသင်ယူ, သင်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသူတို့နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ငါကလူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုကြီးမားတဲ့စတူဒီယိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုများအတွက်ခံစားရတယ်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုသူ့ဟာသူ Dynamic အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့အလင်းတစ်ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့် Houdini ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ software ကိုသုံးပြီး, ငါ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
RSP: သငျသညျမြန်ဆန်မှတက်ရဖို့အတှကျက hard ခဲ့သလား
ဂျေ: အနည်းငယ်။ ငါ၏အအတန်းဖော်အချို့သည် Houdini နှင့်အတူအတှေ့အကွုံခဲ့, ဒါကြောင့်ငါအချို့လုပ်ဖို့တက်ဖမ်းခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့အပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါအယူအဆငါယခင်ကအသုံးပြုခဲ့င်, ဒါပေမယ့်ငါယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိခဲ့တခါ, ကလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်ဆော့ဖ်ဝဲမှနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂျေ: yeah အိုးငါကခစျြတဲ့! ဒါဟာအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂျေ: ဟုတ်ပါတယ်။ Greg နှင့်ဆမ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းရောင်သင်တန်းပို့ချ, အလင်းရောင်ဆီသို့ငါ၏အတပြင်လုံးကိုအမြင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါသင်တန်းပူးပေါင်းချင်ပါတယ်အခါ, ငါအလင်းရောင်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ဘယ်တော့မှစဉ်းစားထား။ ငါ VFX သို့သွားချင်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဝက်ကြောင်းမှတဆင့်ပြန်လှန်။ Greg ငါတို့မှတစျခုခုတို့ကိုပြသ Monsters, Inc သငျတို့သအချို့သောအရောင်များထွက်ကောက်ဖို့အလင်းရောင်သုံးလို့ရတယ်ဘယ်လောက်, အလငျးရောငျအသေးစိတျအထဲကထောက်ပြသည်။ သူကအကြောင်းကအရမ်းစိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်နှင့်အကြှနျုပျကိုချွတ်ပွတ်တိုက်။ ငါသည်သင်တို့ကိုရုပ်ရှင်တစ်အချို့ဧရိယာဖို့ပရိသတ်ကိုရဲ့မျက်စိအလင်းရောင်နှင့်အတူတစ်ဦးပုံပြင်ပြောပြခြင်းသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားနိုင်သည်ကိုသိခဲ့ရတယ်။ သူကစာသားအနုပညာသို့အလင်းကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်။
RSP: သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများ 12 ရက်သတ္တပတ်ကျော်ကဘယ်လောက်ပြောင်းလဲစေခဲ့တာလဲ
ဂျေ: သူတို့ကသိပ်ကိုလျှင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည်။ ငါ RSP မှလျှောက်ထားသည့်အခါကျွန်မလက်ခံချင်ပါတယ်မထင်ခဲ့ပေ။ ငါသင်တန်းပြီးဆုံးအချိန်ကိုအသုံးပြုပုံငါကိုငါချစ်တဲ့အလင်းရောင် showreel ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Technicolor ကပယ်ကိုစေလွှတ်။ , ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်သင်တန်းမှတဆင့်တွန်းဘဲလျက်အကြောင်းကိုဤမျှလောက်ပိုကောင်းသလိုခံစားရတယ်။
RSP: ဘေးဖယ်နည်းပညာဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးကနေ, သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုအဘယ်အရာကိုသင်ယူခဲ့တာလဲ
ဂျေ: ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့၏အလုပ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုရန်ပြောဆိုသောစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များ၏အဆင့်အားလုံးနှင့်ထိတွေ့ရာနေ့ရက်ကို-in-the-ဘဝအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းနေစဉ်အတွင်းကငျြ့ကွံဖို့ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားအကြောင်းကိုအကြံပေးခြင်း, စွန့်တော်မူ၏ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူအများအပြားအစည်းအဝေးများခဲ့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အလုပ်ရှင်များ showreels အတွက်ရှာဖွေပါ။ ငါ့အလုပ်အင်တာဗျူးနှင့်ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်။
RSP: program ကိုသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြည့်ဆည်းခဲ့သလား
ဂျေ: ဒါဟာသူတို့ကိုကျော်လွန်သွား။ ပထမတော့ကိုယ်ကဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်း, ဘယ်လောက်ခက်လွန်းဖြစ်မယ့်ထင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်စစ်မှန်သောဖြစ်ဖို့မထွက်လှည့်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ရည်စူးနဲ့ Hard အလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးလအတွက်, Rising Sun ကရုပ်ပုံများကိုမည်သို့တဲ့ professional ဖြစ်ဖို့ငါ့ကိုသင်ပေးတယ်။
ဂျေ: ငါစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်သူမ Technicolor Adelaide မှလာမယ့်ခဲ့ပြောတယ်သူတစ်ဝမ်းကွဲရှိသည်။ ငါချထားသော, စိတ်ကူးလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ နှစ်ပတ်အကြာမှာသူတို့အင်တာဗျူးအဘို့အကြှနျုပျကိုချေါ။ နှစ်ပတ်သောနောက်, ငါအလုပ်တစ်ခုကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတယ်။
RSP: Fantastic ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်!
ဂျေ: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းသောသင်တန်းနှင့်ကောင်းသောအချိန်ကိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂျေ: ကျွန်မလက်ရှိအလင်းရောင်ဌာနအတွက်သင်တန်းပေးတာပါ။ ကျနော်တို့သေးထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ သူတို့ဟာ Katana ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်နောက်တဖန်တစ်ဖွဲ့လုံးအစီအစဉ်သစ်သင်ယူတယ်။ ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါဟာ Houdini ရန်အလွန်ဆင်တူပါတယ်။
ဂျေ: အဓိကအားဖြင့်ရုပ်ရှင်အထူးပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်မအနည်းငယ်ဆိခဲ့ကတည်းကငါရုပ်ရှင်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုခငျြပါဘူး။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်အတွက်ဇာတ်ကားတွေအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့စျေးမှာ၏မျိုးပါပဲ။
ဂျေ: ငါဗန်ကူးဗားသို့မဟုတ်လန်ဒန်ကိုသွားကိုချစ်ချင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုဖွင့်လှစ်တနေ့၏အိပ်မက်ရှိသည်။ ငါကွန်ယက်တစ်နည်းနည်းမကလူကိုသိရန် get ပြီးနောက်သို့သော်ပါပဲ။
ဂျေ: အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုခံစားပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်သိပ်ခက်ခဲဖြစ်မနေပါနဲ့။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်နေရာရာကိုစတင်ရန်ရှိသည်။ ဒါဟာအလုပ်လုပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာနာရီတွေအများကြီးကြာပါတယ်။ ခက်အလုပ်လုပ်နှငျ့သငျလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်နေသောထင်ဟပ်စေတဲ့ခိုင်မာတဲ့တင်ဆက်မှုအတူတူထားတော်မူ၏။ သင့်ရဲ့အလုပ်အတွက်ယုံကြည်မှု Be နှငျ့သငျခွငျးအားဖွငျ့အရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျငါအလင်းရောင်အနုပညာရှင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုချင်ပါတယ်ကြောင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြောတယ်ချင်ပါတယ်လျှင်, ငါရယ်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာငါဖြစ်၏။
Ragnarok, Logan, X-Men: ပေါကလစ်, Thrones ရာသီ 120, Tarzan ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ၏ဂိမ်း, အီဂျစ်, ပန်, X-Men ကိုးကွယ်ရာ: အနာဂတ်၏နေ့ရက်များကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့် filmography Tomb Raider, ပေတရုယုန်, Thor အပါအဝင်6စီမံကိန်းများကိုကျော်ပါဝင်သည် အတိတ်, The Hunger Games ဂိမ်းက, ဟယ်ရီပေါ်တာဂိမ်း, ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား, အဆိုပါ Wolverine, Prometheus နှင့် The မဟာဂက်စဘီ။
Sound Lounge Promotes Becca Falborn to Executive Producer - မေလ 21, 2019
SMPTE Hollywood Section Hosts 2nd Annual Career Day - မေလ 16, 2019
Cinematic Media Teams with Academy Award-Nominated Sound Editor Martín Hernández to Launch Sound Services - မေလ 16, 2019
ပညာရေး လှံ & Arrows Visual Effects	2018-11-08
ယခင်: ကရာနီ Chapel Modesto အသံလွှင့် Pix BPswitch ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုမှထိန်းချုပ်ခန်း, အဆင့်မြှင့်မှုများစေ့ဆျော
နောက်တစ်ခု: Bannister ရေကန်တိုက်ရိုက်ဒေတာများဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ Motion Path ကိုအတူမိတ်ဖက်ကြေညာ
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ မေလ 2019 (199) ဧပြီလ 2019 (503) မတ်လ 2019 (622) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Editor ကို